Nzira yekushambadzira Kwepamhepo Kubudirira | Martech Zone
Nzira yekubudirira kweKushambadzira Pamhepo
Mugovera, Mbudzi 24, 2012 Chishanu, Mbudzi 23, 2012 Douglas Karr
Reachlocal yaisa pamwechete iyi infographic pane iyo nzira yekubudirira kushambadzira pamhepo.
Sebhizimusi diki rinokwikwidza nemakambani anotengesa mukati menguva yezororo, unogona kuyedzwa kutamba iyo "Ndiani anogona kushevedzera zvakanyanya?" mutambo. Izvo hazvisi izvo chete zvakaomarara pane diki bhizinesi 'nguva uye bhajeti, asi zvinogona zvakare kupatsanura vatengi vakavimbika vawakashanda zvakaoma kuti uwane. Saka, chii chaungaite mwaka uno wezororo kushambadzira rako bhizinesi diki uye kunzwikwa kunyangwe nevakwikwidzi vakuru? Tevedza nzira yekubudirira pane yedu Diki Bhizinesi Mugovera infographic uye edza aya matipi mashanu kusimudzira ako emunharaunda zvinopihwa panguva Diki Bhizinesi Mugovera uye mwaka wezororo.
Nehurombo, ini ndinofunga Reachlocal yakapedza iyo infographic panzvimbo yakaoma. Kubudirira hakutange kana iwe uchinge uchinjisa inotungamira kuita mutengi. Kubudirira kwemagariro enhau kunouya chaiko paunoshandura mutengi iyeye kuva fan! Kutaurirana zvinobudirira neako anotungamira uye nevatengi base inofanirwa, uye kuvakurudzira kuti vagovane yavo yakanaka chiitiko neako brand munzira yekuwongorora, kurudziro, uye kugovana munharaunda ndipo panonyatso kuona mhedzisiro yavaitsvaga!
Tags: infographickushambadzira kwepamhepoonline kushambadzira kubudiriraTsvaga Kutengesaevanhu vezvenhau
SlideDog: Parizvino Mafaira Pasina mushe